★I-MELAQUE 'S IGCINWE KANGCONO INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE EYIMFIHLO EBHISHI★ - I-Airbnb
★I-MELAQUE 'S IGCINWE KANGCONO INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE EYIMFIHLO EBHISHI★
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jorge
I-Beach Front "Cabaña PLAYA " isenhliziyweni ye-San Patricio Melaque, idolobha elincane lokudoba e-Mexico's Pacific Coast. INDLU EYAKHIWE NGAMAPULANGWE iyisitayela sika-60 's Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe eye yagcina imininingwane eminingi yayo endala yasekuqaleni eminyakeni eminingi. Ikhaya elihle lokuvakasha labangane nemindeni ejabulela ukuzungezwa yimvelo. Indawo ekahle kakhulu yokuphumula nokukhululeka ekuphileni kwansuku zonke. Uma ufuna ukuhlala ekhaya lasebhishi lasemaphandleni lena yindawo.
I-Beach Front "Cabaña PLAYA " itholakala kalula ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukuya edolobheni eliyisikwele (ama-Blocks angu-3) lapho uzothola khona izimakethe zendawo, amabhikawozi nezitolo zotshwala.
Inamagumbi okulala angu-3, amagumbi okugezela angu-3 kanye nawo wonke amasevisi obungawalindela ENDLINI EYAKHIWE NGAMAPULANGWE yohlobo lwe-Beach Front 60's:
Umbhede owodwa ogcwele/weNdlovukazi
2 Umbhede olala umuntu oyedwa.
Amalineni asendlini (Amashidi, ama-comforter, amathawula)
I-shampoo / i-conditioner kanye nokugeza umzimba
Umshini Wokwenza Ikhofi
se-Microwave nefriji Ikhishi linazo zonke izinto eziyinhloko zokupheka nokudla ekhaya.
4.73 · 139 okushiwo abanye
I-Beach Front "Cabaña PLAYA " isenhliziyweni ye-San Patricio Melaque, idolobha elincane lokudoba eliyingxenye ye-Mexico 's Pacific Coast.
Njengoba yaziwa ngabaningi njenge-Melaque (meh-lah-keh), le ndawo yokuphumula yasebhishi iyindawo ethandwayo yokuvakasha yemindeni yase-Mexico kanye nendawo yokuphumula ephansi yasebusika yezinyoni zaseqhweni.
Izinto eziyinhloko ezenziwayo ukubhukuda, ukushona ogwini, ukujabulela ukuphuma kwelanga nokushona kwelanga, ukukhuphukela ku- mirador (ukubuka) ngasentshonalanga ye-bay, ukugcwala i-plaza nemakethe yomphakathi, noma ukuhamba ebhishi ukuya e-Barra de Navidad. I-Melaque inikeza izivakashi okokuzithokozisa kwangempela kwase-Mexico okunzima ukukuthola emadolobheni amakhulu ngase-Pacific Coast.
Ungahamba ngezinyawo ukuya noma kuphi edolobheni futhi ungahamba ngezinyawo ebhishi ukuya endaweni engumakhelwane we-Barra Navidad (kuthatha imizuzu engu-30).
Kukhona namabhasi angambi eqolo aya e-Barra Navidad nase-Cihuatlan, cishe imizuzu engu-20 ukuya kude. I-Manzanillo ikude ngemizuzu engu-40 ngemoto. I-Puerto Vallarta iqhele ngamahora angu-3:30 ngemoto.
Hlola ezinye izinketho ezise- San Patricio namaphethelo